Messi ma cayaaryahanka ugu wanaagsan baa? - BBC News Somali
Messi ma cayaaryahanka ugu wanaagsan baa?
12 Jannaayo 2016
Xiddiga u dhashay dalka Argentina una dheela kooxda Barcelona, Lionel Messi ayaa ku guulaystay abaalmarintii shanaad ee ciyaaryahanka ugu wanaagsan kubadda cagta adduunka ee Ballon d’Or-ka.
Ma ay jirto cidkale oo xitaa ka soo ag dhawaatay tiradaasi.
Haddaba ma yahay ciyaaryahanka abid ugu wanaagsan kubadda cagta?
Waa uu yahay, oo dhab ahaantii ciyaaryahankaasi waa mid aan caadi aheyn markii laga fiiryo waxa uu kooxdiisa Barcelona u soo hooyay.
Waxaana caddeyn u ah in markii shanaad uu ku guulaystay biladda Ballon d’Or-ka, sidoo kalana waa ciyaaryahankii ugu khatarsanaa ee abid xirtaa fanaanadda ay caanka ku tahay kooxda Barcelona.
Tobansano wax ka badan ayuu ka mid yahay ciyaaryahanada heerka koobaad waxa uuna si weyn usoo caan baxay ciyaar ka tirsaneyd Horyaalada Yurub oo ay 10 sano ka la dheeleen kooxda Chelsea, markaasi oo uu muujiyay awooddiisa xirfadadeed.
2007-dii ayey aheyd markii ugu horreysay ee Messi loo magacaabo inuu u tartamo Ballon d’Or-ka, markaasi waxa uu galay kaalinta saddexaad, kaalinta labaadna waxaa galay Cristaino Ronaldo oo markaa u dheeli jiray kooxda Manchester United, halka Kaka oo Milan ahaa uu biladdii la hoyday.
Messi ayaa wixii markaa ka dambeeyay ay xirfaddiisa kor u socotay oo sanadba sanad u dhiibaysay.
Taariikhdiisana waxa ay gooni u tahay sida uu guusha u joogteeyay, oo weli ma uusan gaarin da’da 30-ka, sidaas oo ay tahayna isaga iyo goolka waxaa ka dhaxaysa aragti oo kaliya, 25 markuu jirayna waxa uu noqday ciyaaryahanka ugu gool dhalinta badan kooxda Barcelona.
Haatan waxa uu haystaa rikoorka goolasha ugu badan ee uu ciyaaryahan ka dhaliyay horyaalka Spain ee La Liga, goolasha ugu badan ee xilli ciyaareed uu ciyaaryahan dhaliyo (50 gool), goolasha ugu badan ee sanad uu ciyaaryahan ku dhaliyo (91 gool), goolasha ugu badan ee ciyaar ka tirsan Horyaalada Yurub la dhaliyo (5 gool) iyo gooldhaliyaha ugu badan ee ku guulaystay abaalmarinta gooldhalinta sanadka Horyaalada Yurub (5 jeer ayuu noqday).
Taasina waxa ay caddeyn dhab ah u tahay sida uu u wanaagsan yahay.
Messi ayaa mucjiso ku ah dhalinta goolasha oo si aan kala go’ lahayn uu shabaqa u cuksiiyo, weliba waxa uu u dhaliyaa si dhoolla caddeyn ah oo ay kalsooni ku jirto, taasi oo ay jeclaysteen taageerayaashiisa dunida, waxa uuna si weyn uga duwan yahay ninka ay ku tartamaan billada uu ku guulaystay ee Cristiano Ronaldo.
Badanaa doodad ku saabsan ciyaaryahanka abid ugu wanaagsan dunida waa mid weli aad u taagan.
Balse waxaan shaki ku jirin in laba ciyaaryahan ay isku haysan jireen laacibka ugu wanaagsanaa adduunka abid – waa Pele iyo Diego Maradona – dhab ahaantiina Pele oo kaliya ayaa ah ciyaaryahanka saddex jeer ku guulaystay Koobka Adduunka.
Sidoo kale rikoorka goolasha uu dhaliyay oo gaaraya 1,281 oo uu dhaliyay 1,363 kulan oo uu saftay, oo ah midda saddexaad ee ugu badan adduunka, taasina waxa ay caddeyn xooggan u tahay inuu yahay ciyaaryahan weyn, hasayeeshee heerka difaaca ee uu Messi la kulmo todobaadkasta ma gaarsiisnayn midda uu la kulmi jiray.
Dhanka kale Maradona ayaa sanadkii 1986-dii ku guulaystay halkiisa koob ee Adduunka oo weliba uu ku gaaray markii uu gacan adeegsaday.
Goolkiisa labaad ee uu ka dhaliyay xulka Ingiriiska ciyaarihii rubac dhammaadka tartanka ayaa ahaa mid cajiib ah.